अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको अभियानका ३ उच्च सदस्य सेल्फ आइसोलेसनमा « Janata Samachar
अमेरिकामा कोरोनाविरुद्धको अभियानका ३ उच्च सदस्य सेल्फ आइसोलेसनमा
काठमाडौं । अमेरिकामा कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानका ३ उच्च सदस्य सेल्फ–आइसोलेसनमा गएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लड्नका लागि महत्वपूर्ण रणनीति बनाउने ह्वाइटहाउस कोरोना भाइरस टास्क फोर्सका ३ उच्च सदस्यहरु सेल्फ–आइसोलेसनमा गएको बीबीसीले जनाएको छ ।
संक्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा आएकाले आफूहरुमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंकामा उनीहरु दुई साताका लागि सेल्फ–आइसोलेसनमा गएका हुन् । कोरोना भाइरसविरुद्धको वर्तमान युद्धमा अमेरिकाका प्रमुख व्यक्ति बनेका डा. एन्थोनी फाउचीसहितका ३ अधिकारी आइसोलेसनमा छन् ।
उनी प्रमुख रहेको नेशनल इन्स्टिच्यूड अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सस डिजिजले डा. फाउचीमा संक्रमण भएको हुन सक्ने सम्भावना भने न्यून रहेको बताएको छ । शुररुवाती परीक्षणमा फाउचीमा संक्रमण देखिएको छैन । ७९ वर्षका फाउचीले दुई साता आइसोलेसनको क्रममा घरबाटै काम गर्नेछन् र नियमित रुपमा उनको परीक्षण हुनेछ ।